Uller Ski - Ski, anya anwụ na enyo egwuregwu maka ndị na-eme egwuregwu - ULLER
N'ihe niile 🤘
MAKA SKI SUNGLASSES
ULLER, CHINEKE NKE oyi
Emebere ya na maka ndị na-agba ọsọ n'obi
GOGGLES SKI nwere lenses foto
GOGGLES SKI nwere lenses magnetik na-agbanwe agbanwe
Mkpuchi SKI kacha arụ ọrụ
Emere ya na ihe kachasị mma iji nagide ọnọdụ kachasị njọ: blizzard, snowstorms, ifufe ... Na usoro oyi akwa okpukpu abụọ. Dual Layer AntiFog iji zere fogging ma nye gị ọhụụ kachasị mma n'oge kachasị njọ.
Hụ ihe mkpuchi SKI niile
Mmasị nke ugwu, ọhụrụ snow na-agafe na ihu, nnwere onwe, mmasị ... Powder Days
ULLER® Ngwa ahịa TECH dị elu
ANY FE na-enwe egwuregwu, ANY ARE na-egwu egwuregwu
Uller® bụ akara egwuregwu optics nke mebere yana maka ndị hụrụ egwuregwu n'anya nke ọma. Atụmatụ teknụzụ dị elu na-ekwe nkwa arụmọrụ kachasị mma na ntụkwasị obi kachasị na ọnọdụ kachasị njọ n'oge omume egwuregwu ọkachamara.
KEDU IHE Ọ BỤ ULLER?
Kwuo banyere Uller ọ bụ inwe mmetụta nnwere onwe, ikuku na ihu, ọchịchọ ịbụ ụdị kachasị mma nke onwe anyị. Na-achọ imeziwanye kwa ụbọchị, setịpụ ihe mgbaru ọsọ ma ghara ezuru ya. Adrenaline ahụ na ike ahụ na-eme ka mmụọ nke ika anyị pụta n'ime ngwaahịa nke ga-eso gị na nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a.
Ndị otu anyị na-ekepụta ngwaahịa kachasị mma maka gị kemgbe 2006, na-eme mgbanwe maka mkpa egwuregwu gị na usoro. Ụdị ụdị anyị dịgasị iche iche ga-eme ka ị chọta nke ga-adabara gị mma. Anyị na-elekọta nkọwa niile ma anyị na-eche, karịsịa, maka nkasi obi na nchekwa gị. A sị ka e kwuwe, n'ime ihe omume egwuregwu niile ọ bụ maka inwe mmetụta ahụ na ụda nke uche, na Uller na-achọ ijide gị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ onwe gị nke ọma.
Anyị na-eguzo maka uru anyị bara maka ego ma anyị na-ahọrọ ihe ndị na-etinye onwe anyị na akpụkpọ ahụ gị, na-ajụ onwe anyị ajụjụ a "anyị ga-ejikwa ya?". Ọ bụ ya mere anyị ji tụkwasị obi nke ukwuu na anyị
ngwaahịa. Gị na ndị otu anyị bụ otu karịa ka ị chere!
Obodo nke Uller Ọ naghị akwụsị itolite, na ihe kacha mma bụ na ọ dị iche iche. Anyị nwere ndị ọkachamara ọkachamara na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-amu amu. Ọ na-amasịkwa anyị ịbụ ndị mmekọ zuru oke n'ọsọ dị anya, kamakwa na nzọụkwụ mbụ. Na ọtụtụ n'ime ha, anyị na-ejedebe inwe mmekọrịta chiri anya, n'ihi na n'ime ala maka anyị, ha abụghị naanị ndị ahịa: ha bụ ndị mmekọ ndụ. N'ezie, anyị na-enwe nnọọ mpako na-eche na ha bụ ndị, mgbe ha na-anwale ngwaahịa anyị, na-abịa mgbe niile. Mo Yan, onye nwetara ihe nrite akwụkwọ 2012, ekwuolarị: "Ịnwụ anwụ dị mfe, ibi ndụ siri ike."
Na anyị bụ ndị riri ahụ ndụ dị ka ole na ole ndị ọzọ.
Egwuregwu bụ akụkụ nke njirimara anyị, ma mgbe anyị na-emepụta ma na ọrụ anyị kwa ụbọchị n'ọfịs. Anyị na-agbalị mgbe niile itinye ya na obere mmegharị ahụ, ọ na-ejedebe na-abụ isi axis nke oge efu anyị. Anyị na-eji ezumike na oge efu na-agagharị, anyị ji n'aka na ị na-emekwa ya! N'ezie, ọ na-enyere anyị aka ịchọta nkwekọ n'onwe anyị na ile ndụ anya n'ụzọ ka ukwuu na ume.
Ahụmahụ afọ ndị a niile na-enye anyị ohere ịgwa gị na anyị na-ekesa karịa mba 30 na Europe, Asia, America na Oceania. Anyị nwere ike ịnye mkpuchi n'agbanyeghị ọtụtụ narị puku
kilomita nke nwere ike kewapụ anyị na gị. Ihe kachasị mma bụ na, n'ime oge ndị ọzọ, anyị na-ejikọta gị na netwọk mmekọrịta anyị. Anyị na-enwe mmasị ịnụ nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa anyị na ịmepụta n'ime
gburugburu Uller mmetụta nke na-ejikọta anyị n'ezie. Ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ ndị na-agba nzọ na ika anyị ka ha gaa n'ihu na-akwadebe onwe ha. Ị bụ otu n'ime ha?
Ọ na-adị mma mgbe niile iji Uller. Ihe kpatara ya? Na anyị nwere ngwaahịa dịgasị iche iche ebe ọ bụ na ndị ahịa anyị nwere mkpa dị iche iche. Oleekwa otú anyị na-agaghị ekpuchi ha?
Ihe kpakpando nke Uller bụ ihe mkpuchi ski. Emebere ya maka ski na snowboarding, ndị niile na-agba ọsọ na-eji ha na-edebanye aha na nkasi obi na ịdị mma ha, n'ihi na e nwere ọtụtụ ụdị, na n'ime ha anyị na-agbanwe atụmatụ na agba na ọdịdị ka ọ bụrụkwa ngwaahịa kachasị amasị gị. N'aka nke ọzọ, anyị ga-enwe ma ugogbe anya maka anwụ, iko egwuregwu na motocross, ha niile mepụtara site n'aka ndị ọkachamara na-emepụta ma na-edozi àgwà na njikwa ọrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ okpu, na Uller anyị nwere ụfọdụ ọmarịcha atụmatụ maka ndị ikom na ndị inyom ga-adabara gị dị ka akpụkpọ anụ nke abụọ.
Site Uller anyị wepụtara ịnọnyere gị n'ọnọdụ niile enwere ike, na ụbọchị nke ndị na-azụ ahịa anyị bụ isi. Obodo ndị ọkachamara lens enyochala ugogbe anya maka anwụ anyị, ha niile nwere nchekwa UV 400 iji nye gị uru kacha mma maka ego na ngwaahịa niile anyị malitere. Atụmatụ anyị na-atụ aro bụ ụdị dị iche iche na-achọkwa nkasi obi gị mgbe niile, na nke a nakwa ụdị gị. Uller Ọ na-asọmpi na ụdị kachasị mma na ọnọdụ ugbu a yana, na mgbakwunye na ọkachamara na mpaghara egwuregwu, ọ na-achọkwa ịbụ onye gị na ya na-emekọ ihe na ọnọdụ na oge mgbe ị na-adịghị ọzụzụ.
Ụdị dị iche iche dị na ụdị ndị a na-enye anyị ohere ịmegharị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, n'ụzọ na-enweghị njedebe kpọmkwem. Ya bụ, ị na-etinye style! Anyị bụ ndị na-emegharị ma ghara ịkwụsị ịmepụta. Ụdị unisex a dabara na nkà ihe ọmụma nke ndụ anyị yana ụkpụrụ ika anyị nwere. Uller anyị chọrọ ibuga Na webụsaịtị anyị ị nwere ike ịchọgharị ha niile. Ihe dị ịtụnanya bụ na ị nweghị ike ịchọta nke gị!
Igwe oghere nke ugogbe anya maka anwụ anyị ga-emekwa ka ọhụhụhụ dị nro karị ma mee ka nwa akwụkwọ gị kwekọọ n'ụdị gburugburu na ụdị ọkụ ọ bụla.
Ịgba ịnyịnya na enyo enyo na-agba ọsọ
Otu n'ime uru kachasị ukwuu nke obodo anyị dị iche iche bụ na, n'usoro ịmepụta na ịmepụta ụdị anyị, anyị nwere otu ọkachamara ọkachamara na ihe na usoro anyị na-eji. Nke a na-enye anyị ohere ịmalite enyo egwuregwu ga-enyere gị aka ichebe onwe gị pụọ na Sun na egwuregwu ndị dị ka ịgba ígwè, ịgba ọsọ ma ọ bụ nzọ ụkwụ. Na mgbakwunye, anyị na-enye gị ohere ị gụchaa iko ndị a n'ụzọ ahaziri ahazi. Ọ bụghị anyị niile nwere anya lynx, mana anyị agwala gị… anyị na-emegharị gị!
Ngwaahịa anyị niile na-achọ ịmepụta mmekọrịta ahụ na kọntaktị ahụ na okike, na n'ihi nke a Uller Ọ nwekwara ụfọdụ okpu ndị nwere ike iso gị na ụbọchị gị. Nhazi anyị bụ unisex na pụrụ iche n'ezie. Ha nwere ọdịdị nke na-enye ha ohere ime mgbanwe na nha ọ bụla ekele maka mmechi ha na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụ ngwa ngwa nke bụ akụkụ nke uwe mkpuchi nke onye ọ bụla na-eme egwuregwu, nke anyị bụ nke mbụ! Ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe na nke mara mma nke na-eji ọdịdị gị egwu egwu n'ụzọ nkịtị. Ihe mere e ji kee ha nwekwara ọtụtụ ihe jikọrọ ya na akụkọ ihe mere eme ha n'onwe ya. Ị na-ahụ, na otu nke Uller anyị nwere mmetụta uche… mana anyị masịrị ya nke ukwuu! Ihe a ma ama nke iji ụdị ụdị a malitere na 60s ihe dịka. Ọ bụ oge ndị na-anya ụgbọ ala si n'ụlọ ọrụ anụ na ngalaba ọrụ ugbo malitere ịhazi onwe ha site n'aha na akara ụlọ ọrụ ha, nke mere na oge ọ bụla ha kwụsịrị ịgbanye mmanụ, na-agafe ebe dị anya, ha na-aga njem ibufe ngwa ahịa ya. , onye ọ bụla ga-ama aha ahụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ "mkpọsa mgbasa ozi guerrilla" nke ọbụna ndị na-eme ihe nkiri na-amaghị na ha na-emepụta usoro. Ha ahaziri ha tumadi n'ihu okpu, na nke nta nke nta nke ọ bụla ụlọ ọrụ ghọrọ ndị mbụ. N'ụzọ dị otú a, ọ kwụsịrị ịgafe akara n'etiti mgbasa ozi na ngwa ejiji, ma taa, ọ ghọọla isi ihe stylistic.
MOTOCROSS/ ENDURO GLASSES
Na-eme ihe ọmụmụ ahịa Uller Anyị ghọtara na n'ime obodo anyị enwere ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu motocross, ma ọ bụ na ndị enyi ha na ngwụsị izu, ma ọ bụ ọkachamara. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị otu anyị etinyewo nlezianya anya na mkpa a dị mkpa ma mepụta usoro nke motocross na enduro goggle ụdị na-ejikọta àgwà kachasị mma na àgwà ndị dị na ahịa, na-asọmpi na ụdị kachasị mma na nke ugbu a.
Isi àgwà nke ụdị iko a bụ nchebe. E kwuwerị, egwuregwu ndị dị ka motocross na enduro abụghị ihe ize ndụ maka eziokwu dị mfe nke ime ha na gburugburu ebe obibi na ala siri ike. Ma na sekit mechiri emechi ma ọ bụ mepere emepe, ọ gụnyere mmegharị n'akụkụ akụkụ ụlọ akụ na ụzọ ime obodo. N'ime Uller Anyị nwere otu ndị na-eme egwuregwu na-anwale ngwaahịa ndị a ka, na mgbakwunye na ule dị mma dị mkpa, ha na-enyere anyị aka mgbe niile imeziwanye ka anyị ghara ịhapụ ihe ọ bụla.
Ụlọ ọrụ ejikọta ọnụ
ỤBỌCHỊ ỤJỌ ỤZỌ NKE ONYE
Oyi di ebe a, Anyi hu ugwu ocha n'anya